မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၅၄ သန်း ကျော်ရှိရာ ၂၆ သန်းမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်လည်း မြို့ပြ/ ကျေးလက် နိုင်ငံအနှံ့မှ စားသုံးသူများ မိမိလုပ်ငန်း (သို့) ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့ Website အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ရေးဆွဲလို ပါက 01 860 4303 ,09 4200 20 355 ,[email protected] သို့သာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ SUNDEW MYANMAR မှ ဂုဏ်ယူစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါရစေ။
This entry was posted in General and tagged CMS, Marketing, Website. Bookmark the permalink.
← ၂၀၁၆ မှာ မိမိလုပ်ငန်း (သို့)ကုန်ပစ္စည်းကို လူသိများလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Welcome Kreate Holdings →